အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ကားထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ - MYANMORE+
Home News & Features International အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ကားထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေတိုးပွားလာမှုနဲ့အတူ မော်တော်ယာဉ်လိုအပ်ချက်လည်း ပိုများပြားလာတာကြောင့် ကားထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုပမာဏဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကို တိုးမြင့်လာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ နည်းပညာသစ်တွေပါဝင်တဲ့အပြင် သဘောကျ လောက်စရာဒီဇိုင်းရှိတဲ့ ကား Model သစ် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာနေတာပါ။ Auto Mobile Industry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို Drive Media ရဲ့ပရိသတ်တွေသိရအောင် ဒီနေ့အတွက်ဗဟုသုတဆောင်းပါးအနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ဒီဆောင်းပါးမှာ အိမ်စီးကားအမျိုးအစားကိုပဲတွက်ချက်ပြောပြထားပြီး တခြားဘတ်စ်ကား၊ ကုန်တင်ကားတွေမပါဝင်ပါဘူး)
လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ ကားအစီးရေ ဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲ?
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှတ်ပုံတင်ထားပြီးကားအရေအတွက်ဟာ သမိုင်းတလျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် (၁) ဘီလျံပမာဏအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုရလဒ်တွေအရ လက်ရှိတကမ္ဘာလုံးကလမ်းတွေပေါ်မှာ သွားလာနေတဲ့ကားစီးရေစုစုပေါင်းဟာ (၁) ဘီလျံကျော်နေပါပြီ။ (၁) စက္ကန့်တိုင်းမှာ ကား (၂.၆) စီးနှုန်းနဲ့ ထုတ်လုပ်နေတဲ့အတွက် အနာဂတ်မှာကားအစီးရေက ပိုပြီးတောင်များလာဦးမှာပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက၂၀၃၅ ခုနှစ်လောက်ဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ပြီးကားစီးရေပေါင်း (၁.၈) ဘီလျံကျော်ထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်း နှစ်စဉ်ကားအစီးရေ ဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်နေလဲ?
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်စဉ်တိုင်း ကားအသစ် (၈၃) သန်းလောက်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်လိုက်သမျှကားတိုင်းကိုတော့ ရောင်းချလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးကကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်နှစ်တာကားထုတ်လုပ်မှုပမာဏဟာ စီးရေသန်း (၇၀) ကျော်ရှိခဲ့လို့ သမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးအရေအတွက်အဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာရှိသမျှကားအစီးရေအားလုံးရဲ့ ၆၀% ကျော်ကို အာရှနဲ့ သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုန် (Oceania) မှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့အစီးရေ ၂၆% လောက်ကို ဥရောပမှာထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကားထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းရဲ့ နံပါတ် (၁) နေရာမှာ လက်ရှိရပ်တည်နေတာက တရုတ်နိုင်ငံပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ကကား (၄) စီးတိုင်းမှာ (၁) စီးဟာတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံးကားဈေးကွက်အဆင့်သာရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်သူဦးရေနည်းပါးမှု၊ ဝင်ငွေမြင့်မားလာမှု၊ အကြွေးဝယ်စနစ်ကျယ်ပြန့်လာမှု၊ ကားဈေးနှုန်းကျဆင်းလာမှု စတဲ့အကြောင်းတွေက တရုတ်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကားဈေးကွက်အဖြစ်တွန်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
Anhui, Avtovaz , Beijing, BMW, Brilliance, Byd, Chana, Changhe, Chery, China National, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, DaimlerChrysler, Dongfeng, Faw, Fiat, Ford, Fuji, Fujian, Gaz, Geely, General Motors, Great Wall, Guangzhou, Harbin, Hino, Honda, Hyundai, Ij-Avto, Isuzu, Kamaz, Kia, Mahindra&Mahindra, MAN, Mazda, Mitsubishi, Multicar, Nanjing, Navistar, Nissan, Nissan Diesel, Paccar, Porsche, Proton, PSA, Renault, Saic, Scania, Suzuki, Tata, Toyota, Uaz, Vaz, Volkswagen, and Volvo.
ဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိချင်သေးရင်တော့ International Organization of Motor Vehicle Manufacturers ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Ref: Worldometers – “Data on global car production”
Next articleBreadTalk Myanmar ရဲ့ ဆဋ္ဌမမြောက်ဆိုင်ခွဲဖွင့်လှစ်